SIDEE LOO KARIYAA MARAQA JUUSKA JUUSKA LEH LIIN: TALAABO TALAABO QAADASHO LEH SAWIRO - KU'SAABSAN
Sida loo sameeyo xaleef jilicsan jiirka jiilaalka
Maqaayada juuska ku jira sharoobada ee sharoobada ayaa soo baxaya aad u dhadhan fiican. Iyadoo diyaarinta saxda ah, xaleefyada waa la helaa oo dhan oo la mid ah miraha la shiiday, iyo liin waxay bixisaa dufan qurux badan waxayna ka caawisaa ilaalinta midabka quruxda badan.
Faa'iidooyinka macaanka ee isbiirsaday
Pear wuxuu hayaa waxyaabo badan oo faa'iido leh iyo ka dib karinta. Cuntada miro waxaa ku jira birta, potassium, selenium, copper iyo manganese xitaa ka dib marka daaweynta kulaylka. Faytamiinada qaarkood waxay sidoo kale u gudbaan si guul leh (tusaale ahaan, fitamiin C, PP).
Carbohydrateska ku jira miro badani waxay ku badan yihiin fructose iyo isticmaalka macaanka ee ka yimaada ma aha mid adag sida beeryaraha sida nacnaca miraha kale.
Waxaad hubaal noqon doontaa inaad xiiseyneyso inaad akhrido sifooyinka wanaagsan iyo waxyeelada ee pear.
Saliidda muhiimka ah ee miraha khudradda waxay siisaa dhadhan wacan, taas oo loo tixgelinayo antidepressant. Cellulose iyo pectins ee ku jira iyaga waxay leeyihiin saameyn togan oo ku saabsan metabolism iyo mareenka caloosha. Intaa waxaa dheer, pectins ka sameeyaan miro kuwan mid ka mid ah cufan iyo dhadhan fiican leh.
Sida loo karsado xaleef macaanka
Sidaa darteed, waxaan u jeedinaynaa ugu muhiimsan - soo-saarka tooska ah ee samaynta macaanka.
Qalabka jikada iyo qalabka
Si aad u dhigto macaanka jilicsan aad u baahan tahay qalabka soo socda iyo agabyada soo socda:
miskaha lagu karsado macaanka - 1 xabbo;
scapula - 1 koob;
qaadada weyn - 1 xabbo;
nus litir dhalooyinka lafdhabarka leh ee furka xargaha - 3 xabbo. Waad qaadan kartaa bangiyada caadiga ah ee daboolka ah ee duubista, laakiin markaa waa inaad furaha ujirtaa.
Waxaan kugula talineynaa in aad naftaada u baratid raashinka roodhida leh ee haweenka, lingonberry, gooseberry, quince, dhirta Manchurian, currant madow, strawberry, cherry, currant cas iyo strawberry duurjoogta ah.
Si aad uga dhigto xaleef jilicsan, maaddooyinka soo socda waa lagama maarmaan:
isteroberi - 2 kg;
liin - liin ½ liin;
sonkorta - 1.2 kg;
biyaha - 200 ml.
Waa muhiim! Kiimikadu waa inay bislaadaan, laakiin waa shirkad, haddii kale lakabyo waa la kariyaa.
Talo-tallaabo tallaabo tallaabo ah
Si loo sameeyo macaanka this, samee waxyaabaha soo socda:
Nadiifi nuuska, nadiifi ka soo duub oo jarjar xaleef, ku duub baaquli. Maqaarka lama jarayo.
Ma taqaanaa? Laga yaabe, pear waxaa soo saari jiray Giriiggii hore ee kun sano ka hor xilligeena iyo ka yimid Hellas si tartiib tartiib ah u faafay dunida oo dhan. Waxaa jira qiyaastii kun oo nooc oo geed ah oo miro ah.
Si fiican u dhaq oo liin, gooyaha daboolka oo jarjar qeybta yar ee khafiifka yar. Ku dar lafaha miskaha, si siman u faafa dusha sare.
Warshad gaar ah, kariyo sharoobada sonkorta iyo biyaha (kuleylka hooseeya, kareyso si joogto ah). Si taas loo sameeyo, biyaha sonkorta waxaa la keenay karkariyo, caato ah iyo kariyo kuleylka hooseeya si cad.
Shub sharoobada khudradda leh sharoobada keentay iyo u keen karkariyo kulaylka yar. Karkari lafteeda waa in laga fogaadaa. Mar mar, lafa-miskeedka leh miro si kor loogu qaado loona ruxo xakameynta lakabka jeermiska, isku dayaya in aan waxyeello u geysan. Kiimikada waqti isku mid ah soo saaraan casiir, kaas oo si tartiib ah u dabooli doona iyaga. Cinjiryada sare waa in si tartiib ah loogu dhufanaa sharoobada leh shaashadda leh si ay iyagana u kululaan, oo u sii daa casiir.
Samee sharoobada sharoobada laftirka ah lix saacadood.
Dibedda ku dheji mar labaad dabka kaddibna isku karsaaraya. Laakiin waqtigan, iyaga ku karkarin karkarinta muddo 10 daqiiqo ah, marmarna ruxin miskaha iyo mararka qaarkood, haddii loo baahdo, si tartiib ah u kareyso.
Mar kale iska ilaali pear-ka kulaylka 6-8 saacadood.
Ku celi tallaabooyinka 6-7 laba jeer.
Karkarro jeex ah oo afar jeer ka badan kulaylka ilaa inta la kariyey ilaa 20 daqiiqadood. Wakhtiga cuntadani ugu dambeysay waxay ku xiran tahay hibada nuugista iyo xoogga dabka ee ay diyaar yihiin. Si aad u eegto diyaargarowga sharoobada sharoobada dhowr dhibcood oo kudheer - waa in aysan faafin. Isla mar ahaantaana, sharoobada waa in aan si adag loo karin, sababtoo ah waxay noqon doontaa mid qaro weyn ku leh bangiga.
Waa muhiim! Daboolka furan waa in la xidho, helitaanka cirbadda. Haddii daboolka laga saaro muraayadda marka xiritaanku uu furan yahay, farqiga ayaa la sameeyaa, iyo ilaalinta ayaa laga yaabaa in ay soo baxdo. Bangiyada waa in ay buuxsamaan macaanka buuxa, laakiin ka tag ilaa 1 sentimitir ilaa dhamaadka si aysan u taaban daboolka birta.
Inkasta oo sharoobada iyo lakabyada la kariyo si loo helo dawlad la rabo, nadiifiso dhalooyinka iyo daboolka.
U diyaari macaanka diyaarinta ee barmiilka la diyaariyey iyada oo la qaadayo weel wayn oo ka soo baxa miskaha, kaas oo ku taagan kuleylka ugu hooseeya. Si fiican u xidh dhuufyada daboolka leh.
Maxaa kale oo aad ku dari kartaa
In macaanka this for dhadhan, waxaad ku dari kartaa qorfe ama vaniljiga (vanilj). Waxay fiicnaan doontaa in lagu daro isteroberi iyo liin la jarjaray oo xididdo faleemo cusub ah. Lemon, ee maqnaanshaha, waxaa lagu bedeli karaa qaarna. Waxaad tijaabin kartaa: dhadhan badan oo citrus ah, ku dar liistooyin kala gedisan oo la jarjaray.
Noocyada ugu caansan ee isteroberyadu waa "Xusuusta Yakovlev", "Chizhovskaya", "Muscovite", "Just Maria", "Avgustovskaya dew", "Williams summer", "Veles", "Klapp's favorite" iyo "Beautiful beauty"
Sida loo dhigo macaanka
Suugada saxda ah ee la kariyey waxaa lagu hayn karaa xaalad guri oo ah meel qallalan oo mugdi ah (xarig ama xargo). Markaad xajisid, iska ilaali qoraxda qorraxda iyo heerkulka sare, ha u dhigin kuleyliyaha iyo bateriga.
Tani waxay banaan tahay iyada oo aan lahayn dhagaxyo, oo badanaa ku jira kiimiko ah. Sidaas awgeed, waxaa lagu kaydin karaa illaa saddex sano ah heerkulka ilaa +20 ° S.
Waxa aad cuni kartid
Noocyada noocan oo kale ah waa macmacaan aad u fiican oo kufilan cabitaanka shaaha ama kafeega. Cinjirada oo dhan ayaa loo isticmaali karaa inay sameeyaan keega macaan oo furan. Malmal this si fiican u adeegay leh canjeelada iyo canjeelada.
Ma taqaanaa? Dunida qadiimka ah, isteroberi ayaa loo soo bandhigay hadiyad la siinayo ilaahyada: Hera iyo Aphrodite - Giriigga, Juno iyo Venus - ee Rooma.
Macmacaan waxaa lagu faafin karaa jalaatada ama wareegga wareegga halkii miro dufan lehna ku shub sharoobada. Waxay sidoo kale si fiican u buuxin doontaa daahanada.
Diyaarinta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa raaxo macaan oo macaan. Waxay diyaarineysaa in ka badan hal maalin, hase yeeshee aysan waqti badan iyo tamar badan ku haynin, waxaad samayn kartaa karinta waxqabadka kale ee guriga. Xannibaadaha ku habboon ee la kariyey waa kuwo aad u fiican oo caan ah oo leh dad badan. Xilliga jiilaalka, waxaad ku raaxeysan kartaa macaan oo ubax leh, dhadhan fiican leh oo qurux badan leh.
Qodobka faa'iido leh ee caanaha qumbaha
Sida loo abuuro loona koro qajaarka "Berendey"
Tamaandhada Krasnobay: rikoodhka, wax-soo-saarka, goor dambe oo aan caddayn
Qeexida iyo sawirka noocyada orchid noocyada Miltonia
Si looga hortago dhacdada of dirxiga, waxaa lagama maarmaan ah si joogto ah u qodo oo beeraan ciidda. Haddii ay weli muuqdaan, markaa waa waqtigii lagu bilaabi lahaa halis dhab ah. Dirxiga Maybot: sida loo wajaho iyaga? Way adagtahay in laga takhaluso, laakiin haddii aadan sidaas samaynin, markaa waxaad ku odhan kartaa farxad beereed. Read More
Shallots: Kaloori, Isticmaal, Guryo faa'iido leh iyo ka horjeeda
"Pear" "Zaveya": dabeecadaha, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ku'saabsan 2020